Iyo komponi mudziyo wekuwachisa maziso unogona kuvhura chikamu cheyewashow uye chikamu chegawa zvakasiyana, kana kuvhura eyewash uye yekugezera panguva imwe chete. Chikamu chekugezesa uye yekugezesa zviri kudivi rimwe chete.
Iyo Bohua eyewash gungano inguva-imwe chete ichikanda kuumbwa ine yakatsetseka pamusoro, yakasimba kumanikidza kuramba uye hupenyu hwakareba hwebasa. Iko hakuna kuputika kwechiitiko munguva yechando kana yakakwira mvura kumanikidza. Yakaderera mhando inogara iri welded zvikamu. Iko kugadzirwa kwacho kwakaomarara uye kwakanyanya kusunganidzwa, izvo zvinongokanganisa chitarisiko asi zvakare zvinopfupisa hupenyu hwebasa. Munzvimbo dzinotonhora kana kana kumanikidza kwemvura kukwirira, zviri nyore kukonzera kuti kuwedzera kwehubhu kuputika.
Sefa: Rukanda rwekutanga rwePP yakakwira-simbi firita yekusefa maturu makuru mumvura. Iyo yechipiri dura inoshandisa ina-nhurikidzwa yepamusoro-density 304 simbi isina simbi grid yakadzedzereka chimiro kuenderera mberi nekusefa tsvina yakasviba, ichiparadzira kuyerera kwemvura, ichiita iyo mvura kubuda-uye, uye zvinyoro nyoro kumeso maziso kudzivirira kusvibiswa uye yakasimba mvura kuyerera kubva mukukonzera kukuvara kwechipiri kumeso
Musoro wekugezesa une hafu-buri dhizaini kumucheto, uye arc yakatetepa kumakona maviri akatsetseka eR250 neR39 zvakateerana, kuitira kuti mvura yekugezesa ipararire pamwe neakisi kumadziro emukati mebheseni, kureba kwe1524mm, inosvika kufukidzwa kwe508mm muhupamhi Iyo renji, inosangana zvizere nezvinodiwa zveAmerican Standard yekugezera renji yeziso reziso.
Iyo yepamusoro vharuvhu bhora inotora maviri-chidimbu bhora vharuvhu, iri nani pane imwe-chidimbu bhora vharuvhu, ine hombe yekuvhura, iyo inogona kusangana neAmerican muyero wekuyerera kuyerera kweziso. (Kuyerera kuyerera ≧ 75.7L / min, eyewash kuyerera ≧ 11.4L / min zvinoda, inoshanda uye nekukurumidza kuyerera), inoshanda uye nekukurumidza kuyerera.
BH30-1010: Yekutanga modhi
BH30-1011: Yero ABS pfapfaidzo
BH30-1011L: Green ABS pfapfaidzo
BH30-1011: Yero ABS pfapfaidzo + yekuputika-chiratidzo bhokisi + kurira uye mwenje alarm
BH30-2011: Yero ABS pfapfaidzo + ABS yero yekubatanidza pafiripi yekuvhara
BH30-1012zp: Push nemaoko maviri + otomatiki kudurura (gungano rine vharafu yekurasa)
BH30-1316: 316 zvinhu
BH30-2010: White ABS kubatanidza clamshell
BH30-1111: Kukwiza mukati nekunze (mapaipi egiredhi rechikafu)
BH30-1010T: Yega chiteshi eyewash
BH30-1018: Chashandurwa kubva kune yakakosheswa tambo yekubatanidza kuenda kune snap-pane kubatana
BH30-2012: 304 simbi isina waya yekubatanidza clamshell
Pashure: Yakasarudzika eyewash